China Ummbila Harvester ifektri kanye nabaphakeli | RY AGRI
Umshini wokuvuna umbila we-4YZ-4B / 3B uhlobo oluthile lomshini wokuvuna ummbila ngesisekelo sokumunca kokubili ubuchwepheshe basekhaya nakwamanye amazwe obuthuthukisiwe bommbila wokuhlanganisa abavuni. Umshini uyinoveli ekwakhiweni, futhi ungaqedela yonke inqubo yokusebenza kusuka ekukhetheni ummbila, ukuhambisa, ukugoqa, nokupakisha ukusika utshani nokurisayikilisha ngasikhathi. Isetshenziswa ngokukhethekile ukuvuna izikhwebu zommbila.
Amandla (KW / HP)
Uhlobo oluhlanganisiwe lokudonsa isiqu se-roller nebhodi lokukhetha
Ubukhulu (L * W * H)
8100 * 2300 * 3450
Imodi yamagiya we-Shift no-No.
Izinyathelo zokuhamba ezinganyakazi; Amashifu ama-4 negiya eli-1 elihlehlayo
Unyathela (mm) wesondo lokushayela (i-axle yangaphambili)
Unyathela (mm) wesondo lokushayela (i-asi engemuva)
Ukusetshenziswa kwephethiloli (kg / h)
Ukushintsha isikhala somugqa / isikhala esingcono kakhulu somugqa
Ukusebenza uhla (mm)
UMax. athula ukuphakama (mm)
Ingqikithi yesisindo (kg)
Ubuncane. ukukha ukuphakama (mm)
Ukuzivumelanisa nezimo okuhle: ukuphakama kokulayishwa okusanhlamvu kungenziwa ngezifiso, amamitha angu-2.7 afanele ukulanda amaloli ezindaweni eziningi.
Amathayi okushayela anokuqina okuhle komkhiqizo, amandla aqinile okuthwala amandla nekhono eliqinile lokulwa nokuwohloka, okwenza ukuthi ikulungele ukusebenza ngemuva kwemvula ekuqaleni.
Ukuphakama kokukhetha okuncane kwepulatifomu yokukha kuphansi futhi ukuzivumelanisa nezimo kuhle.
Lungisa ijubane ngokuya ngezinhlobonhlobo zezitshalo, ukoma nokumanzana kwezitshalo.
Injini ihlangabezana nezidingo zemisebenzi ehlukene ekuhambeni ngezinyawo, imisebenzi engabuyisi, nokubuyela ensimini, konga amandla nophethiloli
Ukusebenza kahle High:
Umshini wonke uhamba futhi isivinini somsebenzi siyanda, izingxenye ziyathuthukiswa, futhi ukusebenza kahle komsebenzi kuphezulu.
Iroli ukukha has ukukha okusezingeni eliphezulu kahle.
Umzimba omfushane, i-engeli enkulu yokuqondisa, irediyasi encane yokuqondisa, ukubamba okuguqukayo kalula.
Ngelifthi, izindlebe zisatshalaliswa ngokulinganayo futhi ukuhanjiswa kuyashelela.
Igranari iyandiswa ukuze kuncishiswe inani lezinhlamvu ezothulwayo nesikhathi esisizayo.
Uphethiloli omkhulu unciphisa imvamisa yokufaka uphethiloli.
Ukubuyisela emuva izwi, ukuphepha nesikhathi ukonga
Ifakwe i-shredder, umphumela wokuchoboza muhle.
Oshayayo wenza i-granary cleaner futhi anciphise umthwalo womshini.
Sinesipiliyoni seminyaka eminingi sokuthekelisa, singaqhuba ukulungisa iziqondiso okukude noma ukufakwa kwamakhasimende. Uma kunesidingo, onjiniyela bangathunyelwa phesheya kwezilwandle ukuqeqeshwa kokufakwa. Uma udinga ukuvuna izinhlamvu zommbila, sicela uxhumane nabasebenzi bethu benkonzo yamakhasimende futhi bazokuncomela umshini ofanele.
Langaphambilini Ukusabalalisa Umanyolo Wezolimo
Olandelayo: Isikebhe Esizimele Sihlanganisa Umshini Wokuvuna